🥇 ▷ Ka dib dhammaan Motorola One Zoom ma ahan taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Android One'! ✅
Ka dib dhammaan Motorola One Zoom ma ahan taleefanka casriga ah ee loo yaqaan ‘Android One’!
Motorola One Zoom waa taleefanka casriga ee Motorola oo leh kamaradaha gadaal gadaal. Waxaan xasuustaa usbuucii la soo dhaafay, in bixinta iyo faahfaahinta telifoonkan casriga ah ay soo galeen internetka. Hadda waxaa jira war badan oo cusub oo ka imanaya qof baaluq ah oo naadir ah qalad ah. Miyuusan Motorola One Zoom uusan ahayn waxa ay u egtahay!
Isha isha cusub ayaa ah Roland Quandt (@rquandt) wuxuuna u aaday barta Twitter-ka si uu ula wadaago macluumaadka. Marka hore, waxay ku celineysaa in taleefanka casriga ah xitaa loo yaqaan Motorola One Zoom oo aan aheyn Motorola One Pro.
Si kastaba ha noqotee iyo ka soo horjeedda waxa ay u muuqatay in aanan lagu khiyaanayn karin magaca. Kaliya waa in Motorola One Zoom uusan aheyn Android One Phone sida qalabka kale ee Motorola ee “magacooda” magacyadooda. Caddayntu waa taas Roland Quandt wuxuu cadeeyay in aaladdaani la imaan doonto is dhexgalka khaaska ah ee Amazon Alexa (hoos ka muuqda).
Qalabkan ayaa leh afar kamaradood oo dhabarka ku yaal. Xagga hoose ee dareemayaasha ayaa ah astaanta caanka ah ee Motorola, taas oo tan ku jirta nalka. Xaqiiqdii, waa taabasho aad u xiiso badan oo ku saabsan kooxdaan. Waa inaan dhahaa waxaan runtii jeclahay naqshadeynta. Waxay leedahay hawo aad u qaali ah, xagga dambe iyo xagga hore labadaba.
Aaladda ugu weyn ee kaamirooyinka afargeesaha waa 48 megapixels. Sida muuqata waxay leedahay xasillooni muuqaal muuqaal ah oo indhaha ah. Tani waxay ka dhigan tahay in mid ka mid ah saddexda kamaradaha kale ee ku dhow 48MP dareemaha koowaad uu leeyahay xasilinta indhaha.
Si kastaba ha noqotee, waxaa la xaqiijiyay inay ku shaqeyn doonto ‘Snapdragon 675 chipset’ iyo sidoo kale Redmi Note 7 Pro. Marka waxay lahaan doontaa 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah kaydinta UFS oo ay kuxirto kaadhka MicroSD. Qiimaha qalabkani wuxuu noqon doonaa 399 Euros.
Macluumaadkaan ka sokow, si kastaba ha noqotee, leakster-ka ayaa sidoo kale la wadaagay bixinta taleefanka gacanta. Mid ayaa shaaca ka qaaday in aaladdaani ay leedahay codka sare ee codka kor ku xusan halka dhanka kale ay tahay saxanka SIM Card.
Renderings ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in aaladdaan ay horay ula soo dagi doonto barnaamijyada ka socda Amazon. Kuwaas waxaa ka mid ah Amazon Music, Sawirrada Amazon iyo maqalka.
Motorola waa inuu ku dhawaaqo One Zoom at IFA 2019.